नयाँ चालक अनुमतिपत्र का लागि परिक्षा हुने नहुने बारे भर्खरै आयो अत्यन्तै जरुरी सूचना ! – AB Sansar
December 2, 2020 Ab-संसारLeaveaComment on नयाँ चालक अनुमतिपत्र का लागि परिक्षा हुने नहुने बारे भर्खरै आयो अत्यन्तै जरुरी सूचना !
काठमाडौँ- काठमाडौँ उपत्यकाका यातायात व्यवस्था कार्यालयले तत्काल नयाँ चालक अनुमतिपत्रका लागि परीक्षा सञ्चालन नगर्ने भएको छ । काठमाडौँ उपत्यकामा कोभिड–१९ को सङ्क्रमण फैलिरहेकाले तत्काल नयाँ अनुमतिपत्र खोल्नेबारे कुनै निर्णय नभएको एकान्तकुनास्थित चालक अनुमतिपत्र कार्यालयका प्रमुख सम्बरबहादुर कार्कीले बताउनुभयो । सामान्य अवस्थामा यी कार्यालयले नयाँ अनुमतिपत्रका लागि परीक्षा सञ्चालन, नवीकरण र अनुमतिपत्र वितरण गर्दै आएका थिए । गत चैतदेखि भने कार्यालयले नयाँ अनुमतिपत्रका लागि परीक्षा सञ्चालन गरेका छैनन् ।
मन पराएको युवतीको अन्तै विवाह भएपछि ललितपुर को किष्ट अस्पतालका डाक्टरले गरे दे’ह त्या’गको प्रयास
प्रधानमन्त्री ज्यू,पौडेलको गिरफ्तारी तपाईँका लागि निकै महँगो पर्नेछः गगन थापा